Soo-saareyaasha Soo-saareyaasha Cuntada & Soo-saareyaasha Raw Oxandrolone (Anavar) - Warshadda
Oxandrolone waa nadiif, anabolic steroid hormone analog of testosterone. Wakiilkan waxaa loo isticmaali karaa daaweynta bedelidda testosterone ee ragga qaba hypogonadal, cudur-sidaha HIV-ga, iyo xaalado kale si loo kordhiyo xajinta nitrogen-ka iyo xajmiga muruqa.
Qalabka Oxygrolone (Anavar) budada (53-39-4) video
Kalluunka Oxandrolone waa mashiinka steroid-ka samaysan, oo la mid ah testosterone oo caadi ah. Kiniinada Oxandrolone waa "anabolic" steroid taasoo kor u qaadeysa koritaanka unugyada muruqyada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu caawiyo dib u soo celi miisaanka qalliinka ka dib, qalqaalin daran, ama infekshin joogto ah. Root Anavar budada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa dadka aan haysan karin ama u haysan miisaan caafimaad leh sababo caafimaad oo aan la garaneynin. Xidigga Oxandrolone ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in la yareeyo luminta murqaha oo ay keento isticmaalka daawooyinka steroids, iyo in la yareeyo xanuunka lafaha dadka qaba osteoporosis.
Root Anavar waa daawada anabolic antholic si loo dhiirrigeliyo daaweynta dabiiciga ah si kor loogu qaado culeyska miisaanka ka dib markii uu miisaankiisu hoos u dhaco ka dib markii qalliin degdeg ah, infekshin joogto ah, ama jahwareer daran, iyo bukaannada qaarkood oo aan haysan sababo cad oo cudurro fayaqacnimo ah ay ku fashilmaan inay helaan ama uhaan culeyska caadiga ah, Cudurka borotiinka ee la xariira maamulka dheeraadka ah ee corticosteroids, iyo raaxada xanuunka lafaha inta badan la socota osteoporosis. Isticmaalidda stabdhab anaboole waa noocyada derajada synthetic ee testosterone.
Raw Oxandrolone (Anavar) budada (53-39-4) Smamnuucista
Product Name Root Oxandrolone (Anavar) budada
Magaca Kiimikada Anavar; Oxandin; Ilaaliyaha; Vasorome
Molecular Wsideed 306.44
barafku Psaliid 235-238 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 455 - 460.4 ° F
Biological Life-Life Dadka waaweyn: Saacadaha 9.4-10.4, waayeelka: Saacadaha 13.3
Color White in beige budada
SOlubility 2 mg / mL (xal cad);
Application Si loo hubiyo in qiyaasta tamarta jirka iyo borotiinka jirka ah si loo hubiyo dheellitirka nitrogen ee wanaagsan.
Waa maxay budada Oxygrolone (Anavar) budada (53-39-4)?
Oxandrolone (53-39-4), oo lagu iibiyey suuqyada magacooda ah ee Oxandrin iyo Anavar, oo ay ka mid yihiin dawooyinka asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo kor u qaadista culeyska xaaladaha kala duwan, daaweynta corticosteroid muddada dheer, si ay u taageeraan ka soo kabashada gubashada daran, si loo daaweeyo lafaha xanuunka la xariira osteoporosis, si loogu caawiyo horumarinta gabdhaha leh xanuunka 'Turner syndrome', iyo calaamado kale.
Sidee budada Oxandrolone (Anavar) budada ah (53-39-4) shuqullada
Inta lagu jiro dhismaha molecular, Anavar wuxuu u shaqeeyaa adigoo bedelaya carbon-2 oo leh atomi oksijiin tan iyo markii loo qaabeeyey. Cimiladu waxay ka caawisaa inay iska caabiso jiritaanka jidhka oo sidaas darteed ka dhigaysa mid wax ku ool ah kuwa isticmaala. Marka isbeddel labaad la sameeyo, booska kowaad ee toddobaadku wuxuu ku wareegayaa isbeddelada isbeddelka ee loo yaqaan 'staboid anabolic'. Anavar si sahlan ayaa ugu xidhan xajiyaha xasaasiyadeed, taasina waxay keeneysaa awoodda ay ku bixiso faa'iidooyinka daaweynta. Xakamaynta xayawaanka iyo xajiinta waxay sidoo kale ka caawineysaa isticmaalka hoormoonka triiodotyronin ee laga helo jirka.
Rooga Oxandrolone (Anavar) budada (53-39-4) Qiyaasta
Waa in marka hore la fahmo in Anavar caadi ahaan lagu xakameynayo steroids kale. Tani waxay badanaa sabab u tahay xaqiiqda ah in dad badani ay tixgeliyaan Anavar sida steroid fudud oo fudud, sidaas darteed waxay u baahan tahay baahida loo qabo in la isticmaalo steroids kale oo xooggan oo loo isticmaalo. Sidaa darted, kahor intaan Anavar lagu taliyo stero-yada anabolic iyadoo la adeegsanayo ujeedada hagaajinta waxqabadka waxay ku jirtey 15 - 25mg maalintiiba kuwa bilowga ah. Si kastaba ha noqotee, maalmahaas, aqoonta casriga ah iyo macluumaadka la heli karo, bilawga qiyaasta ayaa lagu talinayaa in ay ka yara yara yaraato sida lagu caddeeyay cilmi-baarisyo qaar ah halkaasoo Anavar qiyaasta qiyaasta 20 - 80mg maalintiiba loo baahan yahay bukaannada AIDS-ka si loo hakiyo oo loo noqdo murqaha lafdhabarta . Iyadoo tan la sameeyey, waa ammaan in la yiraahdo qaadashada daawada Anavar waa inay ahaataa mid ka mid ah 30 - 50mg maalintii. Bilawga cusub ayaa loo yaqaanaa sida caadiga ah wax uga qabashada si ka fiican si loo yareeyo qiyaasaha xayawaanka kala duwan marka loo eego dadka isticmaala steroid dhexdhexaad ah, ama sareeya. Tani waa arrin aad u badan oo kiiskan la soo bandhigay, iyo Anavar awooddiisa oo ah ugu yaraan wakhtiyada 3 ee Testosterone, bilawga ah waa inuu awoodaa inuu sameeyo guulo badan oo ka soo ifbaxay kor ku xusan. Qiyaasta dhexdhexaadka ah ee Anavar caadi ahaan waxay ku dhacdaa xaddiga 50 - 80 mg maalintii, dadka isticmaalayaasha sarena waxay u badan yihiin inay ka sarreyso heerarkaas, halkaasoo tirada dadka ugu sarreeya ay isticmaali doonaan 80 - 100mg maalintii. Inkasta oo ay muhiim tahay in la xusuusto in qeexitaanka macmiilka sare ee anabolic steroid (marka ay timaaddo steroids anabolic) ma aha qiyaaso sarreeya. Anavar waxaa badanaa lagu dhejiyaa xeryahooda kale, sida kor ku xusan. Waxa kale oo caadi ah dadka isticmaala badan inay rabaan inay ka faa'iideystaan ​​Anavar oo ah asaasiga asaasiga ah ee wareega kasta, halkaas oo Anavar qiyaastu ay ku dhici karto dhammaadka qaybaha sare ee mid kasta oo ka mid ah meelaha la bixinayo iyada oo xeryaha kale ee kudhaca xayndaabku ay yar yihiin (sida Beddelidda Testosterone Daaweeynta - TRT - qiyaasaha Testosterone).
Anavar waa mid ka mid ah steroid anabolic taas oo inta badan loo isticmaalo ciyaaraha fudud ee haweenka, iyada oo awoodeeda hoose ee korriinshaha marka la barbar dhigo Testosterone iyo steroids kale. Baadhitaanka waxaa si dhif ah loo arki karaa isticmaalka habboon ee haweenka Anavar. Tilmaamaha daaweynta asaasiga ah ee daaweynta ayaa marnaba sheegin tilmaamo takhasus gaar ah loogu talagalay haweenka. Si kastaba ha noqotee, ka mid ah jilidda iyo jimicsiga dhismaha, qiyaas caadi ah lagu taliyo ujeedada waxqabadka iyo horumarinta jireed waa midka 5 - 10mg maalintii, kaas oo haween ah ay tahay inay soo saaraan xoog wax ku ool ah iyo isbeddel jireed oo leh khatar yar oo loogu talagalay dhinaca foosha iyo fayraska saameyn. Waa lagama maarmaan in haweenka isticmaala Anavar muddo aan ka badneyn 4 - 6 ayadoo ay sabab u tahay saameynta asrogenic ee la xiriira Anavar. Xitaa steroid anabolic sida fudud oo ah sida Anavar ee ku saabsan saameynaha iyo qufacaha soo saari kara iyo waxay soo saari doonaan saameynaha ficil-celinta marxaladda sii dheeraato dhismaha.
Faa'iidooyinka Oxygrolone (Anavar) budada (53-39-4)
Kordhay xajmiga muruqyada
Staveo-da Anavar wuxuu ku soo boodaa xayawaan aad u gaaban oo isticmaalkeeda ah. Oxandrolone sida caadiga ah ma sameysanto dhismo macaan. Sidaa darteed, markii la cunay, miisaanka la helay ayaa loo beddelay qiyaasta murqaha. Taas macnaheedu waa inay jiri karto biyo yarida muruqyada marka la isticmaalayo Anavar. Hoormoonka wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan sidii loo sameynaayo steroids kale sida Nusriillada iyo halkii ay ka dhigan tahay muruqyada caatada ah. Faa'iidada tan waxay tahay in macaamiisha la helayo marka la isticmaalayo Anavar ay u fududahay in la ilaaliyo wixii ka soo baxay iyada oo loo marayo isticmaalka qiyaasaha kale ee badan ee steroid ah. Sidaas darteed waa ku haboon tahay shakhsiyaadka jecel in ay daadiyaan dufanka isla markaasna ay joogteeyaan muuqaal caato ah.
In kasta oo ay tani u muuqato inay cillad u tahay ragga raba in ay la kulmaan qulqul weyn, waxaa lagu soo dhaweynayaa dumarka. Dumarka intooda badan ma rabaan in ay si weyn u dhejiyaan sida ragga, iyo steroidkani waa habka ugu haboon ee lagu gaaro rafcaanka la doonayo.
Anavar badanaa waa la barbar dhigaa testosterone ragga. Waxaa la yaab leh, waxay ka caawisaa haweenka inay yeeshaan murqo caajis ah marka ay kaliya bixiso waxyeellada yar ee dhismaha ee ragga. Dumarku si ammaan ah ayay u isticmaali karaan iyada oo aan laga cabsanayn inay horumariyaan sifooyinka dadka.
Dad badan oo raba in ay yareeyaan dufanka jirkooda ma aha kuwo jir ahaaneed. Marka ay dhibaatadan soo gaadho, inta badan shakhsiyaadka waxay ku dadaalayaan in ay hubiyaan cuntooyinkooda oo ay ku mashquulaan firfircoon jirka ah si ay u gubaan dufanka. Hase yeeshee, tani ma keeneyso isbedel toos ah ee dufanka jirka ee murqaha. Anavar waxaa loogu talagalay in lagu soo galo oo la kordhiyo tan. Si loo yareeyo walxaha dufanka jirka, kalooriyeyaasha waa in la tirtiro wixii ka sii daray. Dieterku wuxuu faa'iido u yeelanayaa dufanka jirkiisa, laakiin habka socodka, muruqyada qaarkood way lumayaan sidaas awgeed jirka ayaa si muuqata u eegaya. Anavar waxay bixisaa karti u yeelashada in muruqyada loo oggolaado sida dufanka ka baxsan.
Intaa waxaa dheer, isticmaalka steroid wuxuu awood u siinayaa jirku in uu wax ku ool u yeesho duxidda dufanka mudada gaaban. Isticmaaluhu wuxuu u muuqdaa mid la isku qeexay oo uu kudhaco ka dib marka loo isticmaalo si ka duwan qof kale oo aan isticmaalin steroid anabolic.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Anavar ee steroidska ugu wanaagsan ee ka mid ah jirka dhismaha waa in ay ka caawisaa inay miisaan u dhigto si dhakhso ah, iyada oo weli la sii wadayo qulqulka murqaha. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan filan natiijooyinkaas adigoon tababarka jidhka iyo nadiifinta cunnida.
Inta badan isboortiga, tiro badan oo jidhka ah ayaa caddayn kara inay tahay caqabad ku ah nashaadka shakhsiga. Sababtaas awgeed Anavar waxaa badanaa loo aqbalaa steroid saaxiibtinimo ah oo ay sameeyaan ciyaaryahano badan maxaa yeelay waxay ka caawisaa inay hagaajiso jirkooda isla markaa ay sii wadi karto baahida jirka ee loo baahan yahay. Inkasta oo Anavar aysan awood u lahayn sida tamarta kale ee lagu siinayo steroids sida Halotestin iyo Dianabol, weli way ku fiican tahay bixinta tamarta cayaaraha. Xoogga la xariira steroid waa mid la aqbali karo maadaama ay keento xawaaraha iyo awoodda wanaajinta inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka. Daroogadu waxay keenaysaa in yaraanta biyaha lagu dhejiyo sida ciyaartoyda cayaartu aysan halis ugu jirin inay ku dhacaan wareegga isticmaalka. Wax walba oo aad ka ogaanayso Proviron ee jirka dhismaha
Soo kabashada musqusha
Isticmaalka Anavar wuxuu horseedaa hagaajinta murqaha muruqyada. Muruqyada ayaa sii wadi doona jimicsi muddo dheer, sidaas darteedna qofku si dhakhso ah uma daali doono. Tani waxay ka dhigaysaa daawooyinka daroogada ku haboon ee loo isticmaalo ciyaartoyda doonaya in ay kordhiyaan waxsoosaarkooda tababarka. Anavar waxay sidaan oo dhan u sii wadi doontaa wali wanaajineysa meelaha kale ee jidhkaaga ka dhigaya mid ka mid ah hababka ugu fiican oo saaxiibtinimo ee waqtiyada xaadirka ah.
Soo iibso Oxandrolone (Anavar) budada Buyaas.com
Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska
Doeker B, Muller-Michaels J, Andler W, oo ah ilmo yaraanta hore ee qaangaadhka ah ka dib marka la daaweeyo Oxandrolone? Horm Res 1998; 50 (1): 46-8
Demming RH, DeSanti L., Oxandrolone, steroid anabolic, J Trauma 1997Jul; 43 (1): 47-51
J. Qalabka Sonokin ee Clinic. 2004 Oct; 89 (10): 4863-72